जगत टमाटालाई खुलापत्र : के क्रिकेट खेलाडी तपाईंको नियन्त्रणबाहिर छन्?
मंसिर १२, २०७४| प्रकाशित २१:४६
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमलाई विगत दुई वर्षदेखि नेतृत्व दिइरहनुभएका तपाईं अहिले जटिल मोडमा आइपुग्नुभएको महसुस गरेको छु।
विश्व क्रिकेट लिगबाट सिधै विश्वकप छनोट पुग्ने बाटो बन्द भइसकेको अवस्थामा अब विकल्प नामिबियामा हुने डिभिजन-२ को शीर्ष २ मा पुगेर विश्वकप छनोट पुग्ने नै हो। सीमित घरेलु प्रतियोगितालाई सधैं दोष दिँदै आइरहे पनि नेपाली क्रिकेटमा असीमित प्रतिभाहरु देखापरे। तर सोचेअनुरुप युवा प्रतिभालाई राष्ट्रिय टिममा छनोट गर्न तपाईंको ध्यान पुगेको देखिँदैन। युवा खेलाडीप्रति तपाईंको विश्वास नभएको विगतमा भएका छनोटले देखाएको छ।
ब्याटिङमा नेपालको कमजोरी देख्दादेख्दै पनि हसिम अन्सारी, कुशल भुर्तेल, अनिल शाह जस्ता ब्याट्सम्यानहरु अन्तिम १४ भित्र पनि अटाउन सक्दैनन्। वैकल्पिक राखिएका कुशल र अनिललाई युएई किन लगिँदैछ? के उनीहरु यो टुरको लागि १४ भित्र अटाउन नसक्ने नाम थिए?
अर्को कुरा, नेपाली क्रिकेटको भू-राजनीति संवेदनशील छ। त्यही भएर एक वर्षअघि चितवनमा तपाईंको पुत्लासमेत जलेको इतिहास साक्षी छ। अहिले हुनुपर्ने के र भइरहेको के छ भन्ने कुरा सबलाई थाहा छ। नेपालका फ्यानहरु गिलिडन्डा फ्यान हुँदै होइनन्, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट नजिकबाट फलो गर्छन्। एकपटक समीक्षा गर्नुहोला।
नेपाल विश्वकप छनोट प्रतियोगिता नपुगे 'कालो दाग' लाग्ने पक्का हो। त्यसबेला रिजर्भ भइरहने 'घरेलु क्रिकेट छैन' भन्ने कारण पनि काम लाग्ने छैन।
भारत जस्तो शक्तिशाली क्रिकेट मुलुकमा समेत सचिन तेन्दुलकरले १६ वर्षमा राष्ट्रिय डेब्यु गरे, जुनबेला त्यो कलिलो बालकमाथि वासिम अक्रम र वाकर युनिसको बलले धज्जी उडाउन सक्थ्यो। मेरो भनाइको तात्पर्य युवा खेलाडीमा तपाईंको विश्वास बढोस्। त्यतिका खेलाडी भएको देशले समेत १६ वर्षे तेन्दुलकरलाई टिप्यो भने निरन्तर फ्लप ब्याटिङ युनिटलाई किन परिवर्तन गरिँदैन? किन अरु युवा खेलाडीमा विश्वास छैन तपाईंमा?
एक-दुई गेममा राम्रो ब्याटिङ गर्दैमा टिममा राख्न मिल्छ? भन्दै गर्दा १० खेलमा समेत नचल्नेहरुलाई किन बोकिरहने? कि ती खेलाडीहरु फुत्त घरबाट निस्किएका हुन् र गुरु? कि काठमाडौं आएर टियु ग्राउन्डमा कुदिरहेको र ब्याट चलाएको देखाउनुपर्ने हो तिनीहरुले? काठमाडौंबाहेक अन्य स्थानमा क्रिकेट हुँदैन र?
यदि अहिलेको अवस्थामा पनि खेलाडी छनोटमा तपाईंको मेहनत काम नलागेको हो भने राष्ट्रिय खेलाडीहरु तपाईंको नियन्त्रणबाहिर छन्। त्यसो हो भने राष्ट्रिय प्रशिक्षकको जागिर-लोभ त्यागेर राम्रो विदेशी प्रशिक्षक करारमा झिकाउन राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई आग्रह गर्नुहोस्।
म कुनै पनि खेलाडीको दूत होइन। यसकारण टिमप्रति चिन्तित छु कि म पनि नेपाली क्रिकेटको एक शुभेच्छुक हुँ।
धन्यवाद, जय क्रिकेट।